Mari-nehupfumi, 01 Mbudzi 2016
Chipiri 1 Mbudzi 2016
Gumiguru 31, 2016
Hurumende yaVaMugabe Yoshoropodzwa neKusatora Matanho Kurwisa Huwori
VaMugabe vakasaina neChishanu chapfuura mutemo we Public Finance Management Amendment Act (Chapter 22:19) uyo unopa masimba kumapoka anochengetedza mutemo pamwe nekurwisana nehuwori kuti asunge pamwe nekukanda mujeri kwemakore anosvika mashanu,vakuru muhurumende vanenge vabatwa vachiita zvehuwori
Gumiguru 27, 2016
Vamiriri veMabhizimusi, Vatengi, Vovimbisa Kutsigira Hurongwa hweRBZ Hwema Bond Note
Mamwe masangano anomirira vemabhizimisi pamwe nevatengi munyika anoti achatsigira chirongwa Reserve Bank of Zimbabwe chema Bond Note icho chiri kutarisirwa kutanga mwedzi unoouya senzira yekukurudzira makambani nevanhu kuti vagadzire nekurima zvinhu zvekutengesa kunze wenyika.
Gumiguru 26, 2016
Hurumende Yokundikana kuBhadhara Mitero yeMizinda Yayo Kune Dzimwe Nyika
Izvi zvinonzi zvave kukanganisa mafambisirwo emabasa kumizinda iyi, sezvo mina yemizinda iyi yave kuendeswa kumatare edzimhosva munyika dzairi.
Gumiguru 24, 2016
Nyanzvi dzeUpfumi Dzotyira Kuti RBZ Iri Kunonoka kuDzidzisa Vanhu Nezvema Bond Note
Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rakatozivisa kuti nhengo dzaro dziri kuramba mari itsva iyi, uye riri kukurudzira kuti hurumende isimbise kushandiswa kwe Rand rekuSouth Africa pane kutungamidza mari yekuAmerica.
Zimbabwe Inobhadhara Chikwereti Chayo kuIMF
Mumashoko avo avaburitsa, VaRice vanoti izvi zvave kureva kuti Zimbabwe haichina chikwereti sezvo yave kufambidzana nezviga zveIMF.
Gumiguru 20, 2016
Dambudziko reMari Robatawo Mabhanga, Zvikuru eVatema
Zimbabwe yatarisana nedabudziko guru rekushaya mari uye bhanga guru renyika reRBZ rinoti richaparura mari yemaBond Notes mwedzi unouya senzira kuyedza kupedza dambudziko iri.
Gumiguru 19, 2016
USAID Yobatsira Vana Zviuru Zvitatu Vange Voziya neNzara kuManicaland
Sangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID rinoti radzivirira rufu rwaigona kuitika kuvana vanodarika zviuru zvitatu kuManicaland kubva kunzara.
Gumiguru 17, 2016
Zimbabwe Yochema Retired Colonel Kudzai Mbudzi
Vagari vemudunu reMasvingo pamwe chete nevemapato anopikisa vabatana mukuchema Retired Colonel Savious Kudzai Mbudzi avo vaizivikanwa munyika zvakanyanya nenyaya yekusaruma vachifuridzira mukushora kwavo mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vachikurudzira kuti vaende pamudyandigere.
Gumiguru 13, 2016
Kunetsa kweMari Kwobatawo veMakambani eNharembozha Anochengeta Mari
Vagari vemudhorobha reMasvingo votsutsumwira vana muzvinabhizimusi vanoita zvekutumirwa kwemari kana kuchengeta mari pachishandiswa nharembozhanhare vakaita se Eco-Cash, vachiti mari yavakunetsa kutora kubva kumakambani aya sezviri kungoitika kumabhanga.
VaMnangagwa Vokurudzira Kurwiswa kweHuwori Munyika
Sangano rinotarisa nyaya dzehupfumi munyika reNational Economic Consultative Forum nhasi raparura gwaro idzva rinotarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvehupfumi richi kuridzira kuti huwori hupere kuitira kuti hupfumi hwenyika husimukire.
Gumiguru 10, 2016
Gakava pakati paAmai Clinton naVaTrump Rofadza Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muAmerica
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kufadzwa nemafambisirwo arikuitwa nyaya dzekutsvaga mutungamiri mutsva munyika iyi sezvo vanokwikwidza vachipihwa mikana yekutaura zvavanokwanisa kuitiri vanhu vachinge vasarudzwa.
Gumiguru 07, 2016
VaCyril Ndebele Vanoshaya
Vaimbova mutauriri wedare reparamende VaCyril Ndebele vakashaya nemusi weChishanu kuchipatara cheMatar Deir kuBulawayo.